एलोन मस्कको स्टारलिंक उपग्रह नेटवर्क स्वीकृत | ग्याजेट समाचार
एलोन मस्कले स्टारलिंक भन्ने ठूलो स्तरको परियोजना प्रस्तुत गरेको लगभग दुई बर्ष भयो। यो प्रोजेक्ट हो जुन स्पेसएक्ससँग सम्बन्धित छ। यस परियोजना को माध्यम बाट, कम्पनी कक्षा मा राख्न चाहान्छ ,,4.425२। उपग्रहहरू जुन सम्पूर्ण विश्वलाई ब्रॉडब्यान्ड इन्टरनेट प्रदान गर्दछ। यो एक महत्वाकांक्षी परियोजना हो, जुन अन्तमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको संघीय संचार आयोग (FCC) द्वारा अनुमोदित भएको हो।
वर्षौं योजना पछि र Google को जस्तै विशाल लगानी को लागी धन्यवाद, यस्तो देखिन्छ कि स्टारलिंक बिस्तारै वास्तविकतामा परिणत भइरहेको छ। परियोजना अन्ततः आधिकारिक गरिएको छ। यसको मतलब एलोन कस्तूरी व्यवसायमा तल झर्नु पर्ने हो। किनभने FCC एक म्याद तय गरेको छ.
एफसीसीले टेस्ला र स्पेसएक्स संस्थापक परियोजनाको समीक्षा गरेको छ। अन्तमा, यसलाई इजाजतपत्र प्रदान गरिएको छ जसद्वारा यसले ,,4.425 s उपग्रहलाई कक्षामा राख्न सक्छ। उनीहरूलाई धन्यबाद, इन्टरनेट गीगाबिट गतिमा प्रदान गरिनेछ, अधिकतम ढिलापन २ ms एमएसको साथ। यद्यपि मूल योजनाहरू स्टारलिंकको लागि कुल १२,००० उपग्रहहरू मिलेर बनेको थियो.
तर अन्तमा अनुमति मात्र ,,4.425२XNUMX को लागी प्राप्त गर्न सकिन्छ। ती सबै सञ्जाल हुनेछ र उस्तै फ्रिक्वेन्सी हुनेछ। थप रूपमा, उनीहरूले एक म्याद तय गरेका छन्। किनकी एफसीसीले तपाईंलाई त्यो बताएको छ कम्तिमा %०% कक्षामा हुनुपर्दछ र मार्च २,, २०२ before भन्दा अघि सामान्य रूपमा सञ्चालन हुनुपर्दछ.
यदि मिति पारित भयो र यो पूरा भएन, तपाईंको लाइसेन्स फिर्ता लिने छ। त्यसोभए इलन मस्कसँग स्टारलिंक पूर्ण रूपमा परिचालित हुन छ बर्ष छ। एउटा चुनौती जसको लागि निश्चित रूपमा तिनीहरू पहिले नै SpaceX बाट काम गरिरहेका छन्। कमसेकम उनीहरूले गर्नु पर्छ।
एफसीसीले एलोन मस्कलाई विस्तृत अन्तरिक्ष मलबे योजनाको लागि पनि आग्रह गरेको छ।। किनकी तपाइँलाई थाहा छ यी उपग्रहहरू मध्ये के हुनेवाला छ जब उनीहरू उपयोगी जीवनको अन्तमा पुग्छन्। यो रिपोर्ट चाँडै नै वितरित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » हाम्रो बारेमा » स्टारलिंक: एलोन मस्कको broad,4.425२। उपग्रहहरूको ब्रॉडब्यान्ड उपग्रह नेटवर्क स्वीकृत भएको छ